मान्छे को स्वभाव हाँस्ने तरिका बाट पनि पत्ता लगाउनु सकिन्छ , कसरि त ! - Samachar PatiSamachar Pati
मान्छे को स्वभाव हाँस्ने तरिका बाट पनि पत्ता लगाउनु सकिन्छ , कसरि त !
काठमाडौं,१४ पौष l भनिन्छ कि जुन काम ठूला ठूला लडाइँले गर्न सक्दैन, त्यो काम तपाईको एक मुस्कानले गर्न सक्छ । यो मुस्कान हाँसामोमा बद्लियो भने त कुरा नै अर्कै हुन्छ । हाँसो एक औषधि हो, जसका धेरै फाइदा छन् । तन–मनलाई निखार्नका लागि हाँसो सबैभन्दा उत्तम थेरापी हो ।
क्यान्सरसँग लडिरहेकी बलिउड अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रेको अवस्था झन जटिल बन्दै